विनयजंग र सपना बारे खुल्यो नसोचेको सत्य, बाबु छोरी भनेर किन यस्तो सम्म भयो ? (भिडियो सहित) - " सुलभ खबर "
विनयजंग र सपना बारे खुल्यो नसोचेको सत्य, बाबु छोरी भनेर किन यस्तो सम्म भयो ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं : बीबीसीको प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरलाई ध’ म्की दिएको आ’रो’प’मा विनयजंग बस्नेत पक्राउ परेका हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आइतबार सपनाले दिएको उजुरीको आधारमा प्रहरीले बस्नेतलाई प’क्राउ गरेको हो ।
परिसरका एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार युट्युबमार्फत् सपनाको न’ग्न त’स्बि’ र सार्वजनिक गरिदिने ध’म्की दिने बस्नेतवि रु द्ध उजुरी परेपछि मंगलबार परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।बस्नेतविरुद्ध प्रहरीले अ’भ’द्र व्य’वहा’रको मु’ द्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि सपना र बस्नेत दुवैजना मिलेर बेवारिसे श’वको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । सपनाको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि बस्नेतलाई काठमाडौं गोंगबुबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी सिंहको भनाइ छ ।
यसअघि सपना र विनयजंग दुवैजना मिलेर बेवा,रिसे श,वको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । सपनाको उजु,रीका आधारमा अनु,सन्धानकालागि बस्नेतलाई काठमाडौंबाट प,क्राउ गरिएको एसएसपी सिंहको भनाइ छ । यही बिषयमा विनयजंगलाई नजिक बाट चिनेका बिश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितीका अध्यक्ष सागर थापाले यसो भने ।
हेर्नुहोस भिडियोमा :
काका, काकी भन्दै पसलमा आउने केटिसंग श्रीमानले गरे बिवाह, गर्भवती बनाएर बच्चा जन्माउँन आफैले काम गर्ने शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पुगेपछि..(भिडियो)
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने
मास्क नलगाएको भन्दै सुपरमार्केटमा पस्न न’पाएपछि महिलाले भि’त्री वस्’त्र खो’लेर मास्कको रुपमा लगाइन्
अस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डाक्टरको हा’तमा, शरीर ग’र्भमै छु’ट्यो
कहीँ तपाइँको कानको बाहिरी भागमा प्वाल त छैन ?